Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy nday: Ny Malagasy sa ny vahiny?
Inty sy nday: Ny Malagasy sa ny vahiny?
Tranga iray isan’ny mahazo sehatra eo amin’ny tontolom-pampitam-baovao maro eto ny tranga fakana takalon’aina ankeriny, na ny “kidnapping”. Iray amin’ireo teboka nifantohan’ny fivorian’ny filankevitry ny governemanta tamin’ny fiandohan’ity herinandro ity ny hoe “hisy fihaonana manokana hataon’ny fitonbdram-panjakana amin’ny alalan’ireo ministera miahy ny tontolon’ny fandriampahalemana amin’ireo vondron’ny fianakaviambe isan-tokony an’ireo karana monina eto”. Ny antony dia hoe mampiteny ny moana ny fisehoan’ny fakana takalon’aina an-keriny (kidnapping) nisesisesy tato ho ato.
Ny fanamarihana voalohany aloha dia tsotra. Tsy manitikitika ny sain’ny maro ve ny hoe “nahoana loatra re no ry zareo karana ihany no misy maka an-keriny toa izany?” Iray na roa no mba ahenoana hoe Malagasy na sinoa nisy naka an-keriny fa saika karana hatrany. Sao mitombina ihany ny resaka mandeha hoe “resaka tsy fifankahazoana eo amin’ny samy karana re io na ilay antsoina hoe “reglement de comptes” e!”
Ny fanamarihana iray koa dia ny tsy fisian’ny fanomezam-baovao momba ireny tranga ireny avy amin’ny fianakavian’ny niharam-pahavoazana (nalaina ankeriny) mba tonga eny amin’ny mpitandro ny filaminana na fanjakana fa toa vitan’ny kiantrano an-tranon’ny samy mpaka ankeriny sy ny havan’ny nalaina an-keriny fotsiny. Na izany na tsy izany koa anefa dia tranga iray isehoan’ny tsy fandriampahalemana izany, ary rehefa ny tsy fandriampahalemana no resahina dia mby an-tsaina avy hatrany ny andraikitry ny fanjakana.
Ny fanamarihana faharoa dia ny hoe “rehefa ny frantsay no miteny manao fanamarihana miendrika fanakianana, satria saika mizaka ny zom-pirenena frantsay ireny karana ireny”, dia miolo-may ny mpitondra fanjakana mandray fepetra toa izao fihaonana hiaraha-mitady ny paikady hifehezana sy hamongorana an’io resaka fakana ankeriny ho takalon’aina io izao. Nahoana no tsy miteny mihitsy ny vahiny rehefa ny Malagasy no ianjadian’ny tsy fandriampahalemana, na dahalo any an-tsaha manafika na jiolahy mitam-piadiana mandroba sy mamono olona an-tanàna? Tsy tombontsoan-dry zareo no voakitika ka tsy olana aminy io fa ny mahavariana dia ny mpitondra fanjakana toa tsy mihazakazaka mikaro-bahaolana fa mihodinkodina hatrany rehefa ny Malagasy no ianjadiam-pahavoazana, toy ny amin’ny tsy fandriampahalemana.
Ny fanamarihana manaraka dia hoe “rehefa te ho mendrika ny anaram-boninahitra hoe Mpitondra fanjakana mahavita azy” re ianao, nahoana raha ny politikam-pirenena momba ny fandriampahalemana no ampiharina sy ezahina hahitam-pahombiazana dia misitraka ny vokatr’izany avy hatrany koa ireo iharan’ny fakana an-keriny toa izao e?” Manjary hosokajian’ny maro ho mpikatsaka hatrany ny tombon-dahiny ho an’ny vahiny toy ny karana hatrany ange ianareo e! Satria ve mpandraharaha manam-bola ny karana dia hokarakaraina manokana fa ny vahoaka, sady tsy kitay no tsy vary maina, dia ampijaliana toa izao? Tandremo ihany an!
Tsy hoe tsy fitiavana vahiny na fankahalana karana na fanomezana rariny ny fakana an-keriny akory izao matoan-dahatsoratra izao fa anehoana kosa ny fahasarotam-piaro amin’ny tombontsoam-bahoaka Malagasy e!